Sales & Marketing Courses | mLearn Myanmar
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှအသင်းခေါင်းဆောင်ရာထူး၊လက်ထောက်မန်နေဂျာရာထူးဖြင့်လုပ်ကိုင်နေသူများအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မန်နေဂျာရာထူးကိုတာဝန်ယူရမည်ဆိုပါကမိမိတာဝန်ယူရတဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲရာမှာ၊မိမိနှင့်လုပ်ငန်းခွင်တွင်းဆက်စပ်နေသူများကို စီမံခန့်ခွဲရာမှာပိုမိုကောင်းမွန်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရင်းမိမိအလုပ်တာဝန်ကို အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင် မည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည် နှင့်ပတ်သက်ပြီး တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sales & Marketing Subscription အားရယူထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆို ခင်းကျင်းပြသခြင်း (Merchandising) ဟာ ထိရောက်တဲ့ Marketing Tool လို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ မိမိလက်ရှိမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ခင်းကျင်းပြသမှုပုံစံဟာ အမှန်တကယ်ရော ထိရောက်မှုရှိရဲ့လား? First Impression ကောင်းတဲ့ ဆိုင်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုသင့်သလဲ? အလားအလာရှိတဲ့ ဖောက်သည်တွေကို ဘယ်လိုပုံစံနည်းလမ်းတွေနဲ့ ခင်းကျင်းပြသပြီး ဆွဲဆောင်မလဲ? ရှိပြီးသားဖောက်သည်တွေကိုရော ပိုဝယ်အောင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေအသုံးပြုသင့်သလဲ? စတဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းမဖြစ်မနေသိထားရမယ့် ခင်းကျင်းပြသခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာတွေကို ထိမိရှင်းလင်းစွာ နားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ဆရာကြီးဦးတင်ဇံကျော် ရဲ့ Retail Merchandising Course ကို mLearn မှာ ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါပြီ။
လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှ အလုပ်ဝင်ရောက်ပြီး ကာလတစ်ခု အကြာ ကြီးကြပ်ရေးမှူး နဲ့ လက်ထောက်မန်နေဂျာ ရာထူးတာဝန်ကို တိုးမြှင့်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ လုပ်ငန်းအစဉ်ပြေချောမွေ့စွာ ကြီးကြပ်နိုင်ဖို့ရာ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်း (၂ ) ရပ်ဖြစ်တဲ့ Your Job (သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့် တာဝန်) နဲ့ Your People (သင့်ဝန်ထမ်းတွေ တာဝန်ယူရမယ့် အပိုင်း) များကို အဓိကထားပြီး End Result (နောက်ဆုံး ရလဒ်)ကောင်းများ ရရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး
Professional Sales & Marketing Execution Program
စျေးကွက်နှင့် အရောင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အစီအစဉ်မှာ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်မယ့်သူများ နဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်နေတဲ့ သူများကို လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာ အမှန်တကယ် ထိရောက်အောင်မြင်စွာ အသုံးချနိုင်ဖို့ အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်း ကနေ လေ့လာနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပို့ချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
How Your Business Can Improve Customer Service?
ပြောင်းလဲလာသော စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းမှာ ဝယ်သူဖောက်သည်များကို အဓိက အလေးပေး ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဟာ အင်မတန် အရေးပါလာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝယ်သူဖောက်သည်တွေ အကြောင်းသေချာသိနိုင်ဖို့၊ ဝယ်သူဖောက်သည် အပေါ် အာရုံစူးစိုက်ထားရှိဖို့၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ နဲ့ ထိန်းသိမ်းရမယ့် နည်းလမ်းတွေကို နမူနာပေါင်း များစွာနဲ့ အဓိကထား တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Accidental Manager Course ကို ဇွန်လကုန်ထိသာ